It is me. Ko Niknayman.: ကိုယ်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာ၊ ကိုယ် ဘယ်နေရာကနေ သုံးနေလည်းဆိုတာ မသိရအောင်။
ကိုယ်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာ၊ ကိုယ် ဘယ်နေရာကနေ သုံးနေလည်းဆိုတာ မသိရအောင်။
ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ရှိကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် မိမိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ခြေရာခံလိုက်လို့မရအောင် အကာအကွယ် ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ် (software) ကို လက်ဆောင် ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆော့ဝဲလ် ကို download လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Key Generator ကိုလည်း download လုပ်ပါ။ Key Generator က Key ကို ယူပြီး ဆော့ဝဲလ် Install လုပ်တဲ့အခါမှာ ထည့်ပါ။
Hide IP Platinum (785KB) http://www.mediafire.com/?1nl4lmnxzxl
Key Generator http://www.mediafire.com/?1ik3y2lvf5x
အမြဲတမ်း အင်တာနက်လိုင်း ၀င်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့် ရဲ့IP ကို ဖုံးကွယ် ထားမထားကို ကြည့်ပါ။ IP အတုနဲ့ဖုံးကွယ် ထား တဲ့အခါကျမှ အင်တာနက်ကို ဆက်သုံးပါ။ IP လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်စပ်ပြီး သိသင့်တဲ့ အရင်တုန်း က ပို့ စ်တွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အင်တာနက် လုံခြုံရေးကို အထူးသတိထားပါ။
သင့်ရဲ့ အင်တာနက်လုံခြုံရေးကို အထူးသတိထားပါ။ (အဆက်)။ http://niknayman.blogspot.com/2007/09/blog-post_6832.html
Posted by Ko Niknayman at 10:54 PM